Paris Maung – Learning French in Burmese 14 | MoeMaKa Burmese News & Media
Paris Maung - Learning French in Burmese 14
Leçon 11 (Lesson 11 ) - Learning French
Paris Maung - Learning French (9)
Leçon 17 (Lesson 17 ) - Speaking French - Maung Paris
Learning French in Burmese - Maung Paris (13)
Paris Maung – Learning French in Burmese 14
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၁၃)
ပါရီမောင်၊ ဇူလိုင် ၂၅ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်)
(မိုးမခ၏ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် အပတ်စဉ်ပြတ်တောက်ခြင်းကို ခွင့်လွှတ်ပါ)
Leçon 14 (Lesson 14 )
Verbe Conjugaison (Groupe3Verbe )အုပ်စု ( ၃ ) ကြိယာများ (အဆက်)
Verbe Pronominal ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောကြိယာများ
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာမှာ အုပ်စု ( ၃ ) ကြိယာများ ဆိုပြီး စတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကြိယာတခုဟာ … ir နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရင် အုပ်စု ( ၂ ) ကြိယာ လည်းဖြစ်နိုင်သလိုအုပ်စု ( ၃ ) ကြိယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းချင်တာပါ။ရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ခွဲခြားနည်းအပြင် participe présentကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လဲခွဲခြားနိုင်တာကိုပါဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါတယ်။ participe présent ကိုကြည့်တဲ့အခါ
– – issant နဲ့ဆုံးရင် အုပ်စု ( ၂ ) ကြိယာ – – ant နဲ့ဆုံးရင် အုပ်စု ( ၃ ) ကြိယာ ဖြစ်ပါတယ်။
( မိုးမခ အတွက် သင်ခန်းစာကို အခြေခံအဆင့်အတွက် ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ရေးတဲ့ အခါကျတော့ ပါရီမောင်ကိုးကားရတဲ့ စာအုပ်တွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တလက်စထည်း ပြည့်စုံသွားအောင် ထည့်သွင်းရေးသားထားတာဖြစ်လို့အသေးစိတ်ဖြစ်သွားရတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်မမှတ်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ ပြင်သစ်စာရဲ့ သဘောကို တီးမိခေါက်မိပြီး အခြေခံအဆင့်ပြောနိုင်ရင် ရပါပြီ။ ကြုံတုန်း မှာတလက်စတည်း ရနိုင်သလောက် ရှင်းသွားတဲ့သဘောပါ။)
အုပ်စု ( ၃ ) ကြိယာ ထဲမှာ အဆုံးသတ်တဲ့ … ir ကြိယာများအပြင် ….dre, …oir, နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ ကြိယာများလည်း ပါဝင် ကြပါတယ်။
offrir အော့ဖရီး။ ပေးကမ်းသည်။ဆက်သသည်
sortir ဆော့ခ် တီး။ထွက်သည်။ထုတ်ယူသည်။
တလက်စတည်း ကြိယာများရဲ့ သဘောသဘာဝကို ရှုင်းပြရမယ်ဆိုရင်၊
၁။ Verbe Transitif သို့မဟုတ် Verbe Intransitif ဖြစ်နိုင်သည်။
( ကြိယာအနောက်တွင် C.O.D Complémént Objet Direct , C.O.I Complément Objet Indirect လိုက်ခြင်း၊ မလိုက်ခြင်း ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားပါသည်)
၂။ ကြိယာတခုသည် လှုပ်ရှား မှု ပြုလုပ်သော ကြိယာနှင့် အခြေအနေကိုသာဖေါ်ပြသောကြိယာ ဟူ၍ ၂ မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် ။
ဥပမာ — écrire အေခရီး ခ် ။ ရေးသည် ။ sauter ဆို့ တေး ။ ခုန်သည်။ courir ကူးရီး ။ ပြေးသည် ။ စသည်ဖြင့် လှုပ်ရှားမှု ရှိသော ကြိယာ၊
devenir ဒ ဗ နီး ။ ဖြစ်လာသည်။ être အက် ထ်ရ် ။ ဖြစ်သည်။ penser ပေါန်း စေး ။ တွေးသည်။
တို့သည် အခြေအနေကိုပြဆိုသော ကြိယာများဖြစ်ကြပါသည်။
စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်း သင်ခန်းစာ ( ၃ )
FLE – 003_Dialogue_p008
( အသံဖိုင် )
Au marché အိုမာ့ခ်ရှေး။ ဈေးမှာ
( Lisa,Lilou et leur maman doivent acheter des légumes au marché)
လီဆာ ၊ လီလူး နှင့် သူတို့ အမေ ဈေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ မဖြစ်မနေ ဝယ်ရပါတယ်။
Stéphanie : Lisa , peux-tu me prendre un kilo de tomates pour faire une belle salade en rentrée?
လီဆာ ၊ မေမေ့ကို ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ကီလို ယူပေးနိုင်မလား ? အရင်ဆုံး စပြီးစားဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အသုပ်အတွက်ပေါ့၊
Lisa : Oui, maman . N’oublie pas que nous devons faire une ratatouille. Il faut que tu prends en plus des courgettes, des aubergines et aussi de l’ail.
ဟုတ်ကဲ့ မေမေ ၊ ကျမတို့ ratatouille လုပ်ဖို့အတွက်လဲ မမေ့နဲ့ဦး။ နောက်ပြီး သခွါးသီး ၊ ခရမ်းသီး နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူလဲ မေမေ ယူရဦးမယ်။
Stéphanie :Lilou, rappelle-moi de prendre des oignonscar il n’en reste plus. Je pense que l’on va se régaler. Je vais également prendre une belle laitue pour demain ainsi que quelques fruits.
လီလူးရေ ၊ ကြက်သွန် ယူဖို့လဲ သတိပေးဦး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြက်သွန် မရှိတော့ဘူး ။ ငါထင်ပါတယ် စားလို့ ကောင်းကြလိမ့်မယ်။ ငါ မနက်ဖြန်အတွက်
ကြက်သွန်မိတ် ( ပုံစံတူ ) ရယ် ၊အသီးတချို့လည်းယူရဦးမယ်။
(သင်ခန်းစာတွင်ပါဝင်သော ရှင်းလင်းချက်ပေးထားသော ဝေါဟာရများ၊ ကြိယာများ၊ အသုံးအနှုးံများ ကို အနီရောင် ဖြင့်ဖေါ်ပြထားပေးပါသည်။ အချို့သော အချိန်ပြပုဒ်ဆိုင်ရာ အသုံးများ၊ နာမ်စားများ သည် အခြေခံအဆင့် အတွက်ခက်ခဲနေပါဦးမည်။ အချို့ကိုချန်ထားခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ — on, en, y စသဖြင့် ၊သပ်သပ်အခန်းအနေနှင့်ရှင်းပါမည်)
သင်ခန်းစာတွင်ပါဝင်သော – – –
tomateတိုမါ့တ် ။ ခရမ်းချဉ်သီး။ un kilo de tomates ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ကီလို
une bouteille de bière အယူးန် ဘူးတိုင်းရ် ဒ ဘီရဲ ၊ဘီယာ တစ်ပုလင်း( ဒီအသုံးအနှုံးက အသုံးဝင်လှပါတယ်)
salade ဆာ့လာဒ် ။အသုတ်( ဒီနေရာမှာ အမနမ်ဖြစ်ပြီး လှပသော ဆိုတဲ့ နာမဝိသေသန belle ကို သုံးထားပါတယ်)
rentrée ရောန့်ထရေး ၊ အရင်ဆုံး စပြီးစားသောအစာ ( အင်္ဂလိပ်လို Starter လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်) ( ကလေးတွေ ကျောင်းပြန် စတက်တာကိုလဲ ခေါ်ပါတယ်)
ratatouille ဒေသ အစာတမျိုးရဲ့အမည်ပါ။ ခရမ်းသီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ သခွါးသီး နှင့် ငြုပ်ကောင်းမှုန့်တို့ပါ သည့် သီးစုံဟင်းတမျိုး)
courgette ကူးဂျက်ထ်၊ သခွါးသီးမျိုးဝင် ပုံစံဆင်တူသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တမျိုး
aubergine အို ဘယ်ခ် ဂျင်း၊ ခရမ်းသီး
ail အိုင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ ( article တွေထည့်ရေးပြဖို့ မလိုတော့တာကြောင့် ချန်ခဲ့ပေမဲ့ un, une, des, le , la, les တွေကို အမြဲသတိရှိပါ )
oignon အိုညွန်၊ ကြက်သွန်နီ ၊
laitue လဲကျူး ၊ ကြက်သွန်မိတ် အကြီးစား နှင့်တူသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တမျိုး
( ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမည်တွေမှာ “e” နဲ့ အဆုံးသတ်ထားပြီး အမနာမ်ဖြစ်လို့ နာမဝိသေသနတွေကို အမနာမ်နဲ့ သုံးထားတာတွေကို သတိပြုပါ)
demain ဒမန်း ။ မနက်ဖြန် (Hier အီးရဲ ၊မနေ့က။ aujourd’hui အို ဂျိုဒွီ၊ ဒီနေ့ )
aussi အိုစီး ။ လည်းပဲ
( မူရင်းကြိယာကိုသာဖေါ်ပြထားသဖြင့် conjugaison ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်။ပေးထားပြီးသောကြိယာများကိုထပ်ပေးမိပါက ပိုမိုကြေညက်သည်ဟုသာ သဘောထားပါရန်)
devoir ဒဗွား ။ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရန် ၊ တာဝန် ( English လို must ) ( နောက်ကဒုတိယ ကြိယာလိုက်ပြီး သုံးစွဲနိုင်သည်)
acheter အာရှက်တေး ။ ဝယ်သည်
pouvoir ပူးဗွား။ တတ်နိုင်သည် ( English လို can ) ( နောက်ကဒုတိယ ကြိယာလိုက်)
prendre ပရောန်းဒ်ရ် ။ ယူသည်။
faire ဖဲခ် ။ ပြုလုပ်သည်။
oublier အူဘလီရေး ။ မေ့သည်
falloir ဖှားလွား။ လိုအပ်သည်။
Il faut partir. အီ ဖှို့ပါ့ခ်တီး ။ ထွက်ခွါဖို့လိုပြီ။ ( မည်သူဟူ၍ အတိအကျ မညွှန်းထားပါ)
Il nous faut travailler. အီနှူဖှို့ ထရာဗိုင်းရေး ။ ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။
Il me faut une voiture. အီ မ ဖှို့အယူန်းဗွားကျူး ။ ငါ ကားတစီးလိုသည်။
rappeler ရာ့ ပလေး ။ သတိရသည်။ သတိပေးသည်။
rester ရက်စတေး ။ ကျန်ရစ်သည် ။ နေသည် ။ရပ်တန့်သည်။
penser ပေါန့်စေး ။ တွေးသည်
တလက်စတည်း လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် အထက်ပါ ကြိယာ တခုစီဖြင့် စာကြောင်း တခုစီ တည်ဆောက်ပါ။ အငြင်းဝါကျ ( Négatif ) ၊ အမေးဝါကျ( Intérrogatif )များ လည်း လုပ်နိုင်ပါသည်။
v nous devons faire
v doivent acheter
v Il faut que
v Je pense que
v rappelle-moi de prendre des oignons
v on va se régaler ပြီးခဲ့သော အခန်းများတွင် on ကိုထည့်သွင်းရှင်းလင်းခြင်းမပြုခဲ့ဘူးသေးပါ။ နာမ်စားများ Pronouns Personnels သင်ခန်းစာ ၄ ကိုမှတ်မိကြမည်ထင်ပါသည်။ အနည်းကိန်း၊ တတိယလူ ဖြစ်သော “ il / elle “ တို့တွင် ” on “ ကို တန်းတူထား၍ သုံးပါသည်။
ဥပမာ – စားသည် ဆိုသောကြိယာ manger အတွက်
il mange / elle mange သူစားသည်၊ သူမ စားသည်
on mange အွန်မောင့်န်ရှ် ၊ ငါတို့စားကြသည်။ (ကြိယာတွင် အနည်းကိန်းဖြစ်နေသော်လည်း အများစုကို မည်သူမည်ဝါ ဟုအတိအကျ မဖေါ်ပြပဲ သုံးလိုလျင် ” on “ ကိုသုံးသည်)
on va သည် သိပြီးကြိယာဖြစ်သော aller ကို conjugaison လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီနေရာတွင် သွားသည် ဟုကြိယာအဓိပ္ပါယ်ကိုသုံးစွဲထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြင်သစ် သဒ္ဒါထဲမှ အချိန်ပြပုဒ်များစွာရှိသည့်အနက် တခုဖြစ်သော Futur Proche (နီးကပ် သော အနာဂါတ် ဟုပြောရမည်ထင်ပါသည်) အသုံးတခုသာဖြစ်ပါသည်။ အနာဂါတ်ကာလ ကိုပြဆိုသော Future သပ်သပ်ရှိနေပါသည်။ လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ သိထားသင့်ပါသည်။ ဖေါ်မြူလာအနေနှင့်ပြပါမည်။
Futur Proche စာကြောင်းတခု တည်ဆောက်နည်း
S နာမ်စား + V ( aller ) ကြိယာ(ချိန်ညှိပြီး) + V ( infinitif ) မူရင်းကြိယာ
Je vais partir. ရဗေး ပါ့ခ်တီး ၊ ကျနော် ထွက်တော့မယ် ( မကြာခင်ကာလတခု)
On va manger. အွန်ဗား မော့်န်ဂျေး ၊ ငါတို့ စားကြတော့မယ်
Nous allons commencer. နူဇာလွန် ကောန်မောန်းစေး ၊ ငါတို့ စ ကြမယ်
ကြိယာတခု၏ သဘာဝကို ကြည့်လျှင် ကြိယာတခုသည် အဆုံးသတ်စာလုံးအရ အုပ်စု (၁)(၂)(၃) တို့မှ တခုခုတွင်ပါဝင်နေခြင်း ၊ လှုပ်ရှားမှု တခုခုကို ပြဆိုနေသော ကြိယာသို့မဟုတ် အခြေအနေတခုကို ပြဆိုသော ကြိယာ ဖြစ်နေခြင်း၊ Verbe Transitif သို့မဟုတ် Verbe Intransitif ဖြစ်နေခြင်း များကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခု Verbe Pronominal ဆိုသည်မှာ ကြိယာတခု ၏ဆောင်ရွက်မှုသည် မိမိကိုယ်တိုင် ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် Verbe Pronominal ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြိယာ အချို့သည် ရိုးရိုး ကြိယာ အဖြစ် သုံးနိုင်သလို Verbe Pronominal အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ – Conduire ကွန်ဒွီးခ် ၊ မောင်းနှင်သည် ဆိုသော ကြိယာကို ကြည့်ရအောင်။
Je conduis la voiture. ရကွန်ဒွီး လာဗွာကျူး ။ ငါကားမောင်းသည်။ ဆိုသောစာကြောင်းတွင် ကားမောင်းသူကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ပြုလုပ်ခံ ကားရှိနေပါတယ်။ တနည်း ကံပုဒ် Object ပေါ့။ ဒီလိုပဲ ကျနော် ပန်းသီးစားသည် ဆိုပြီး ရေးရင်၊ ပြောရင် ပုံမှန် အသုံးနဲ့ပဲ ပြောရပါမယ်။ Verbe Pronominal မသုံးရပါဘူး။
သို့သော် ဥပမာ ကြည့်ရအောင်….
laver လာဗေ ။ ဆေးကြောသည်။ ( ၂ မျိုး သုံးနိုင်ပါသည်)
Je lave la voiture. ရ လာ့ဗ် လာ ဗွာကျူး ။ ငါ ကားကို ရေဆေးသည်။
Je me lave. ရ မ လာဗ့်။ ငါ ကိုယ် လက် သန့်စင်သည်။
Je me lave les mains. ရ မ လာ့ဗ် လေ မန်း ။ ငါ လက်ဆေးသည်
couper ကူးပေး ၊ ဖြတ်သည်။
Je coupe du pain. ရ ကု(ပ်) ဒူ ပန်း ။ ငါပေါင်မုန့်ကို ဖြတ်သည်။
Je me coupe les cheveux. ရ မ ကု(ပ်) လေ ရှေဗါး ။ ငါ ဆံပင် (ကိုယ့်ဆံပင်ကို ) ဖြတ်သည်။
regarder ရ ဂါ ဒေး။ ကြည့်သည်
Je regarde un film d’action. ရ ရဂါဒ့် အန်ဖီးလ်မ် ဒါ့(က်)စီရွန်။ ငါ အက်ရှင်ကားတကား ကြည့်သည်။
Je me regarde dans le miroir. ရ မ ရဂါဒ့် ဒေါန်း လ မီရွား ။ ငါ့ကိုယ်ငါ မှန်ထဲမှာကြည့်သည်။
ပြင်သစ် သဒ္ဒါကို ပိုပြီး ပိုင်နိုင်စွာ လေ့လာနိုင်ဖို့ မြန်မာပြည်တွင်ရှိ လေ့လာသူများအတွက် ပါရီမောင်ရဲ့ ဆရာမရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ ညွှန်လိုက်ချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလို ပါ ရှင်းထားတဲ့အတွက် နားလည်လွယ်ပါတယ်။
နောက်တခေါက်မှာပြန်ဆုံမယ် A la prochaine fois
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Paris Maung